Madaxweynaha Puntland oo Abaal-marin Gudoonsiyay Ardaygi Lambarka Koowaad u Galay Tartanka Qur’aanka Deegaanada Puntland – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo Abaal-marin Gudoonsiyay Ardaygi Lambarka Koowaad u Galay Tartanka Qur’aanka Deegaanada Puntland
Luulyo 11, 2015 3:53 b 0
Sabti, Luuliyo 11, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 10-7-2015 masaajidka Hudda ee magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ku soo gebagebeeyey tartanka Qur\_’aanka Kariimka ah ee Gobolada Puntland.
Xafladdda Soo xiritaanka tartanka oo ka dhacay gudaha masaajidka Hudda ayaa waxaa sidoo kale kasoo qeyb-galay Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Siciid Xassan Shire, Wasiirka Cadaaladda , Diinta iyo Dhaqan celinta Puntland Saalax Xabiib Jaamac, Wasiiro, Xildhibaano, Waxgarad, Aqoonyahan iyo dadweyne kale.
Kadib markii munaasibadii salaada jimce la tukaday ayaa Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediyey waxaa uu culimada iyo cidkasta oo ka qeyb-qaadatay hirgelinta Tartanka Qur\_’aanka kariimka ah ku dhiirigeliyey in ay sii laba jibaaraan , waxaana uu waalidiinta dhashay ardaydii ka qeyb-gashay tartanka ku bogaadiyey sida wanaagsan ee ay u badkooda u tarbiyadeeyeen.
\_’\_’ Munaasibadaan aynu isugunimi waa wixii ugu wanaagsanaa uguna kheyrka badnaa ee laysugu yimaado , anagana runtii farxad weyn ayey nootahay inaan ka soo qeyb-galno munaasibadaan qiimaha weyn ku fadhida \_’\_’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
\_’\_’ Waxaan u hambalyeynayaa dhalinyarada ka qeyb-gashay tartanka Qur\_’aanka kariimka ah , intii guulaysatay ee meesha nala joogta iyo inta kale ee meesha ka maqanba waan u hambalyeynayaa markale waana bogaadin \_’\_’ Ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweynuhu.
\_’\_’ Umadd walba wanaageeda iyo sharafteeda waxaa uu kujiraa sida ay diintooda u xifdiyaan una wanaajiyaan , ka xukuumad ahaana waajib baa naga saaran inaanu difaacno diinteena suuban \_’\_’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shahaado sharafyo iyo abaalmarin la gudoonsiiyey dhalinyaradii ka kala socday Gobolada Puntland ee ka qeyb-galay Tartanka Qur\_’aanka kariimka ah , gaar ahaan ku woodii kaalmaha koowaad, Labaad iyo seddexaad galay.
Ugu dambeyn gudiga Tartanka Qur\_’aanka kariimka ah ee Puntland ayaa Madaxweynaha gudoonsiiyey abaalmarin uu ku mutaystay kaalinta uu ka qaatay qabsoomidda barnaamijkaan iyo dhiirigelinta guddiga iyo tartamayaasha, taasoo uu madaxweynaha kaga qayb qaatay tabarucaadkii dhaqaale ee barnaamijkan lagu hirgeliyey.
Al-shabaab iyo Ururka ISIL oo isku Biiraya
Qaxootiga ka soo barakacay Yemen oo Raashin loo Qaybiyay